Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Portuguese Renato Sanches Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ihe omuma anyi nke Renato na-egosiputa ihe omuma banyere akuko nwata ya, mbido ya, ezinulo ya, ndi nne na nna ya, ibi ndu ya, enyi nwanyi / nwunye ya ibu, uru ya na ndu onwe onye.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, anyị na-ewetara gị njem ndụ nke Midfield, site n'oge ọ bụ nwata ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama. Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ onwe gị sie ike, nke a bụ oge ọ bụ nwata rue mgbe o tozuru etozu - nchịkọta zuru oke nke Renato Sanches Bio.
Nchịkọta akụkọ ndụ Sanches. N'ezie, ọ gụnyere ya Life and Rise Story.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ ya ọdụdụ Portuguese nke na-egwu egwu ma merie UEFA Euro ikpeazụ. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole agụla banyere nkenke Ndụ Akụkọ, nke bụ ihe na-atọ ụtọ. N’enyeghi nnukwu nsogbu, ka anyị banye n’ime ihe ncheta ya.
Renato Sanches Childhood Akụkọ:
Malite na, nne nne ya kpọrọ ya aha 'Bulo'. Renato Junior Luz Sanches a mụrụ na 18th ụbọchị nke August 1997 nna ya, Renato Sanches, na nne ya, Maria das Dores, na Amadora, Portugal.
Ọ bụ naanị otu nwa amụrụ site na njikọ dị n'etiti nne na nna ya. Ntorobịa ahụ dị ọnwa ole na ole mgbe nna ya na nne ya kewara.
Nne ya (Maria das Dores) bụ onye a kacha mara amara n'etiti ndị mụrụ ya. N'ihi ya, Sanches na-ekenyekarị ndị foto ya foto ya na mgbasa ozi mgbasa ozi.
Ọ bụ ezie na ọ pere mpe ka emetụta ya na akparamaagwa, asambodo ọmụmụ ya anaghị edebanye aha ya rue 2002. Ihe a niile mere n'ihi na nna ya nwere nkụda mmụọ kwagara France mgbe ịgba alụkwaghịm ọrụ.
Birthbọchị ọmụmụ abụọ na-emegiderịta onwe ha:
N'ụzọ dị mwute, ọ nwetaghị nlekọta nna n'oge ọ bụ nwata ka ọ kwagara Musgueira, ebe ya na nne ya bi. Ka ọ na-erule oge nna ya si France lọta, ya na nwunye ya mbụ edenyela akwụkwọ amụrụ nwa Sanches.
Ụmụaka nwetakịrị akụkọ nke mbụ na-akọ akụkọ akụkọ
Kaosinadị, ụbọchị ọmụmụ mụrụ '27th November 1993 na 1:33 am'. Nke a megidere ụbọchị ọmụmụ ya (18 August 1997). Ogologo oge a niile mere ka ndị mgbasa ozi na-ekwu okwu n'oge ikpeazụ nke ọrụ ya.
Obi dị m ụtọ na faịlụ ụlọ ọgwụ emesịa kwụsị inwe obi abụọ niile ma mee ka afọ ole ọ dị doo anya. N'okpuru ebe a bụ ihe ndekọ ahụike nke Maria das Dores na Amadora-Sintra Hospital na-egosi ọmụmụ nwa ya nwoke, onye a ga-akpọ aha nna ya: Renato Sanches.
Akụkọ ahụike ahụ mere ka a kwụsị inwe obi abụọ ọ bụla gbasara afọ ndụ ya.
Nwa anyị nwoke zụlitere nne ya na obodo dara ogbenye nke Musgueira. N'ebe ahụ, ya na ndị enyi ya nọrọ ọtụtụ awa na-egwu bọl n'okporo ámá.
Ọbụna mgbe nna ya na-anọghị ya, onye na-eto eto Midia tolitere dịka nwatakịrị nwere obi ụtọ na nkwanye ùgwù dị ukwuu maka ndị isi ya na ndị okenye.
Renato Sanches Ezinụlọ:
Ọ bụghịzi akụkọ na Sanches bụ nwa amaala Portugal. Otú ọ dị, ndị mụrụ ya abụghị ndị Portuguese kama ha si mba abụọ. N'ezie, ọdịdị ya na-eme ka o doo anya na o nwere agbụrụ agbụrụ Africa.
Nke kachasị, nna Sanches bụ nwa amaala Sao Tome na Principe - mba agwaetiti na Gulf of Guinea, Central Africa.
Mgbe nne ya si Cape Verde - obodo agwaetiti dị n'etiti Central Atlantic Ocean. You maara? Mom Ebe nne ya nọ bụ agwaetiti iri nke mgbawa ugwu.
Maapụ na-akọwa ezinụlọ nna na nne ya.
N'ihi nkewa n'etiti nne na nna ya, ọ na-esiri ndị ezinụlọ ya ike igosipụta nke ọma. N'ihi usoro ego ha nwere, Sanches na mama ya bi n'obodo dara ogbenye.
Jerome Boateng nwa akụkọ akụkọ gbasara eziokwu
N'agbanyeghị nke ahụ, agbụrụ ezinụlọ ya egbochighị ya ịgbalị ịbanye na agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ. Kama nke ahụ, ọ ghọrọ isi iyi ya nke na-akpali ndị mmadụ ịchụpụ ịda ogbenye.
Renato Sanches Football Akụkọ:
Ka ọ na-erule oge Sanches na-emechi 8, mama ya mere ka o sonyere na Aguias da Musgueira institute, ebe ọ natara ọzụzụ izizi bọọlụ ya.
Na 2006, onye midfielder dị afọ 9 kwagara na ndị ntorobịa Benfica iji bulie egwuregwu ya. Na-atọ ọchị, Benfica kwụrụ ego nke € 750 na bọọlụ 25 iji bịanye aka na ya.
Ọ bụ n'ezie nwata nwoke nwere nkà n'ọkwá agụmakwụkwọ Benfica.
Renato Sanches Early Career Ndụ:
Oge ya na ụlọ ọrụ ndị ntorobịa Portuguese nwere ezigbo nsonaazụ na ikike ya. E nwere obere egwuregwu nke Sanches na-emeghị nke ọma na pitch, dịka ị nwere ike ịhụ n'okpuru.
Mgbe afọ asatọ nke gosipụtara na ntọala ntọala Benfica, ndị nkuzi ya na ndị nkuzi ya enweghị ike ịgbagha na Sanches etolitela na ọpụrụiche pụrụ iche. N'ihi ya, ha kwalitere ya na ndị isi otu na 2014.
Renato Sanches Ọkachamara Ọrụ na Benfica:
Dị ka a tụrụ anya ya, midfielder mere nke mbụ ya na ngalaba nke abụọ ya na ndị otu Benfica B. O di nwute, ihe ndi ozo di egwu ma nye ya kaadi uhie abuo na nkera nke abuo nke oge 2014-15.
N'ikpeazụ, ọ haziri nkà ya ma bulie ndị otu mbụ n'afọ na-esote. Ka ọ na-aga n'ihu na-achịkwa midfield na egwuregwu dị iche iche, Benfica hụrụ mkpa ọ dị idobe ya na ebe nchekwa ha.
Nke nta nke nta, ọ ghọrọ otu n'ime ụlọ ike na ọkwa nke ụlọ ọgbakọ Portuguese. Ee, ọbụnadị ndị ọgba bọọlụ nọ n’azụ nwere ike ijide ya.
N'ihi ya, ha nwere Sanches bịanyere aka na nkwekọrịta 6-afọ na ha na November 2015. Nkwekọrịta ya nwere nkwupụta ntọhapụ nke € 45 nde. N'ihi nkwado a na-apụghị ịgbagha agbagha, Sanches nyeere Benfica aka inweta 2016 Taca da Liga na Primeira Liga.
Oge o buliri iko mbaụwa ahụ, ọ dị ya ka ọkara nke nrọ ya abiala na mmezu.
Renato Sanches Biography - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
N'ụzọ na-akpali mmasị, Bulo ghọrọ onye mbụ na-asụ Portuguese iji sonyere Bayern Munich ka ọ na-abanye aka na nkwekọrịta afọ 5 na Bavarians na 2016.
Nkwekorita ya, nke ruru ngụkọta nke € 80 nde, na-eme ka ọ bụrụ onye na-agba ọsọ Portuguese kachasị ọnụ ịhapụ Primeira Liga.
Movekwaga ya na Bayern Munich bụ ihe na-eme ka ezinụlọ ya si n'ụlọ ezinụlọ dị n'etiti ma baa ọgaranya.
Na mbu, Bayern ugwo ugwo nke € 35 nde, nke di ka onu ogugu nke ano na ugwo nke ugwo na akuko ha Javi Martinez, Mario Gotze, na Arturo Vidal.
N'egwuregwu mbụ ya, Sanches mere obere mmejọ. Otú ọ dị, e mesiri ya obi ike site n'aka Phillip Lahm na Manuel Neuer na ọ ga-eme ezigbo ọkpụkpọ. N'ihi ya, ọ gaghị enwe nkụda mmụọ site na mmemme mbụ ya maka ụlọ ọrụ ahụ.
N’oge na-adịghị anya, ọ meriri mmeri nke nwata Golden Marcus Rashford maka onye ọkpụkpọ kacha mma nke Europe n'okpuru afọ 21.
Ee, ọ ka gara n'ihu na-edekọ otu ihe ọ rụzuru.
Ọbụna na mmezu dị otú ahụ, Sanches nwere mmechuihu na arụmọrụ ya maka oge ahụ n'ihi na ọ tụghị akara mgbaru ọsọ ọ bụla ma ọ bụ nyere aka.
Akụkọ ndụ Renato Sanches - Akụkọ nke Successga nke Ọma:
Obi dị m ụtọ, Carlo Ancelotti mesiri ya obi ike na ọ ga-anọgide na Allianz Arena maka oge ọzọ n'agbanyeghị arụ ọrụ ya na-adịghị mma. N'ihi ya, e zigara Sanches na Swansea na 2017 ma laghachi na Bayern n'afọ na-esote.
Mgbe ị na-egwu egwu n'okpuru njikwa nke Niko Kovac (onye nchịkwa ọhụrụ nke Bavarian), Bulo nwere ahụ iru ala ma nye ihe kachasị mma na egwuregwu ahụ. Otú ọ dị, o nwetara obere oge ịgba egwu dị ka asọmpi maka ebe etiti dị elu.
N'ihi ya, o kpebiri ịhapụ ụlọ ịgba egwu maka otu egwuregwu ọhụrụ ebe ọ ga-abụ akụkụ nke egwuregwu ahụ mgbe niile. N'August 2019, Sanches sonyeere LOSC Lille na nkwekọrịta afọ 4 nke akọwara uru € 25 nde.
N'ebe ahụ, ọ chịkwara etiti ha wee bụrụ otu n'ime ndị kachasị ọnụ ahịa ndị Lille bịanyere aka na ya.
Ọchịchị ya n'egwuregwu ndị gbara ọkpụrụkpụ mere ka ọ bụrụ ewu ewu n'oge na-adịghị anya.
Ọrụ Ya Pụrụ Iche na Euro:
N'isochi oku ya maka Euro 2016, Sanches mebiri C. RonaldoIhe ndekọ nke ọdụdụ nwata nke Portuguese ka ahọpụtara maka asọmpi mba ụwa. Onyinye ya nye ndị otu ya mere ka ọ bụrụ onye egwuregwu na-enweghị nrụgide.
Ọ na-ewe naanị otu abụọ na Nani maka Sanches iji merie ihe mgbaru ọsọ mbụ ya wee bụrụ onye na-eto eto nke kachasị nta na akara egwuregwu knockout na UEFA European Championship.
Na njedebe, ya na ndị otu ya meriri Euro 2016 - ihe ngosi nke mechara bụrụ ọrụ a na-echefu echefu nke ọrụ ya. Na Euro 2020, Sanches gosipụtara arụmọrụ pụrụ iche. Mana, ndị Belgium kụpụrụ Pọtugal na agba nke iri na isii.
Oge dị ebube nke ọrụ mba ụwa. N'ezie, ọnụ ọchị ya na-akọ akụkọ banyere obi a heụrị ọ meriri Euro maka obodo ya.
Renato Sanches Nwanyị / Nwunye:
Bụ kpakpando bọọlụ na-arụsi ọrụ ike pụtara Bulo enweghị oge iji wuo akụkọ ịhụnanya. N'iji anya ya mara mma, otutu ndi enyi nwanyi gha acho ka ha buru enyi ya nwanyi.
Nye nwere ike ịbụ enyi ya nwanyị? A ga-ekpughe ihe omimi dị n'azụ ndụ ịhụnanya ya, n'ikpeazụ.
Agbanyeghị, Sanches achọghị itinye onwe ya n'ụdị mmekọrịta ọ bụla n'oge a. Ọbụna nne ya na nna ya achọghị ka ya na onye ọ bụla lụọ mgbe ọ na-akwadobeghị maka ya.
Ndụ Renato nke Onwe Onye:
Onweghi onye chere n’echiche na nwata nwoke hụrụ mgbe nne na nna ya kewara site na nwata gaara etolite ma nwee obi ụtọ. Omume ya dị mfe mere ka o kwe omume ka ya na ndị egwuregwu na ọtụtụ ndị ọzọ ama ama Roddy Ricch.
Sanches abụrụla enyi Roddy Ricch nwa oge ugbu a.
Ọbụna n'oge ọ nọrọ naanị ya, a na-ahụkarị Sanches ka ọ na-amụmụ ọnụ ọchị. Ọtụtụ ndị egwuregwu mara ya maka ịdị jụụ na mkpokọta.
Ọchị ya bụ akara ụghalaahịa nke na-akọwapụta ụdị mmadụ ọ bụ.
O doro anya, ọ na-esiri ike ịbanye na akwara ya. N'ezie, ndị na-agba bọọlụ Portuguese bụ nkọwa zuru oke nke onye nwere àgwà Leo zodiac.
Ndụ Renato Sanches:
Anyị ahụwo ndụ nke onye ntụgharị nke Midfield na-eme ihe ọma. Ee, o tolitere n'ezinụlọ dara ogbenye. Ma ugbu a, ọ na-ebi ndụ okomoko nke ọ na-eche n'echiche n'oge ọ bụ nwata.
Sanches ejirila ụgbọelu ụgbọ oloko dị oke ọnụ ma soro enyi ya gaa ụgbọ mmiri ọsọ ọsọ. N'ezie, uto ya maka okomoko buru oke ibu.
Ihe osise a na-achikota etu o si etinye ego ya na akụ okomoko.
Lelee ụlọ n'azụ ya na foto dị n'okpuru. Ọ bụ ụlọ ya mara mma. Sanches depụtara ụlọ na Instagram ya na nkọwa, Bie ndụ ruo oge zuru oke ọbụla ihe ekwere na nkwa. ”
Okposụkedi emi enye okodụn̄de ke ebiet emi mme ubuene m oncekodụhe, idahaemi enye odụn̄ ke ediye ufọk.
E wezụga ọtụtụ akụ ya, onye ọkpụkpọ ahụ nwere anya maka ịnya ụgbọ ala. N'ime mkpokọta ụgbọ ala ya gụnyere G-Wagon, nke ọ kacha hụ n'anya.
N'ịhụpere anya n'otu n'ime ụgbọala ndị mara mma Sanches.
Ezinụlọ Sanato Renato:
N'iburu n'uche na njikwa ya nwere oke nkewa n'oge ọ bụ nwata, ọ bụ ihe dị adị na ndị agbụrụ ga-eche ihe mechara mee ha. N'ihi ya, anyị na-ewetara gị akụkọ gbasara ezinụlọ ya dum, bido na nna ya.
Banyere Nna Nna Renato Sanches:
Dịka e kwuru na mbụ, Bulo na agadi nwoke ya nwere otu aha. Ee, nna ya bukwa aha ya Renato Sanches. N'ụzọ dị mwute, ha abụọ anaghị anọkọ ọnụ.
Nna Sanches bụ nwa amaala Sao Tome na Principe ma nọrọ afọ ole na ole na-arụ ọrụ na France. Ruo ugbu a, nnukwu ndị Portuguese anaghị ekwu ọtụtụ ihe banyere papa ya.
Banyere Renato Sanches 'Nne:
N'ịbụ onye ya na nne ya na-etolite, nwata nwoke ahụ enweghị ọtụtụ ụdị ndụ okomoko. Agbanyeghị, o nwere ihe ùgwù ịchụso ụzọ ọrụ ọ họọrọ.
Ezigbo nne ya bụ Maria das Dores, nkwado ya na-enweghị atụ enyerela Sanches aka inweta ihe ịga nke ọma na bọl.
Otu àgwà pụrụ iche gbasara Maria das Dores bụ ezigbo ịhụnanya ya maka egbugbu. Ọbụna o tinyere ihu nwa ya na aka ekpe ya dị ka anyị nwere ike ịhụ n'okpuru.
Lovehụnanya o nwere maka nwa ya gosipụtara na egbugbu ọ tụrụ na aka ya.
Site na ihe anyị kwuru, nne Sanches mechara lụọ di ma mụọ ụmụ ndị ọzọ. Anyị ahụla ya ka ọ na-eketa ọmarịcha foto nke ezinụlọ ọhụrụ ya. Obi dị m ụtọ na ha niile nwere obi ụtọ ọnụ.
Ezigbo njikwa nke sitere na alụmdi na nwunye nke nne ya nke abụọ.
Banyere ụmụnne nwanne Renato Sanches:
O doro anya na o nwere ụfọdụ ụmụnne ndị nwoke na ndị nwanyị nwere mmetụta dị ukwuu nye ya. Ọ bụ ezie na ha niile bụ ụmụ nwanne ya, Sanches na-enwekarị mmasị iso ha nọrọ.
Otu n'ime ụmụnne ya ndị nwoke pụtara ìhè n'etiti ezinụlọ ya dum, na onye na-eme ihere anaghị eme ihere ịkekọrịta foto ya, dị ka egosiri n'okpuru.
Oge mara mma ya na nwanne ya nwoke nọrọ mgbe o mere baptizim.
Banyere ndị ikwu Renato Sanches:
Onye ọzọ dị mkpa na ndụ ya, ma e wezụga nne ya bụ nne nne ya. Ọ bụ onye a na-agaghị ehichapụ na ibe nke akụkọ ndụ ya.
N'ụzọ na-akpali mmasị, nne nne Sanches bụ onye kpọrọ ya Bulo. N'ụzọ dị mwute, ọ nweghị ihe ọmụma ọ bụla iji kpughee ma ọ bụrụ na ọ ka dị ndụ iji kere òkè na ihe ịga nke ọma nke nwa nwa ya.
Renato Sanches Eziokwu Eziokwu:
Iji mechie Biography nke onye na-etiti anyị, lee ihe ole na ole banyere ya nke ga - enyere gị aka ịghọta akụkọ ndụ ya.
Kemgbe ọtụtụ afọ, ihe omume bọọlụ agawala site na ibi na slum iji nweta ọtụtụ nde Euro ma na-ekwupụta ụlọ obibi dị oke ọnụ. N'oge a na-achịkọta Biography a, anyị emeela atụmatụ Renato Sanches 'Net Worth ka ọ bụrụ ngụkọta nke € 3 Million.
N'ihe dị ka afọ 2021, onye na-eto eto na-enweta ụgwọ ọnwa kwa afọ nke € 2.65 na LOSC Lille. Dabere na nyocha anyị, otu nwa amaala Portuguese ga-arụ ọrụ maka afọ 6 iji mee ihe Sanches na-enweta n'ime otu afọ.
EGO EGO LOSC Lille (€)
Kwa Afọ: € 2,650,000
Ọnwa kwa: € 220,833
Kwa Izu: € 50,883
Kwa :bọchị: € 7,269
Kwa elekere: € 303
Nkeji nkeji: € 5.0
Kwa Nke Abụọ: € 0.08
Anyị emeela atụmatụ nke ọma nyocha ụgwọ ọnwa Bulo ka elekere na-akụ. N'okpuru ebe a bụ ego ole ọ kpatarala kemgbe ị bịara ebe a.
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Renato Sanches's Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Eziokwu # 2: Renato Sanches Tattoos:
O soro nzọụkwụ nke Bruno Fernandes na Nelson Semedo n'ihe banyere inking. Ee, Sanches adọtala ọtụtụ akara na ahụ ya. You hụla apata ụkwụ ya? Ejiri ihe osise mara mma nke ihe eji achọ mma chọọ ya mma.
N'ezie, ọ bụghị ya kacha egbu egbu. Agbanyeghị, ọ nwere ọmarịcha mma gburugburu ahụ ya.
Eziokwu # 3: Sm Smụ Sịga na Drinụ Mmanya:
Site na mkpali, Sanches gosipụtara n'akụkụ ya na ọtụtụ ndị na-achọkarị izu oke egwuregwu na-amasị Bernardo Silva ga-atụle ahụike adịghị mma. You nwere ike ịkọ nkọ na ahụla onye na-eme egwuregwu ahụ na-eji sịga na mmanya na-eme mmeri ya na oge dị iche iche.
Ntụnye nke ụlọ ike Portuguese dị ịrịba ama nke ukwuu. Ọ na-egosi etu Sanches ga-esi dị egwu na midfield nke klọb ya na oge ndị na-abịanụ. Olileanya, anyị ga-ahụ n'oge na-adịghị anya ikike ọ nwere ịrị elu na ọkwa nke Joao Cancelo n'ọdịnihu.
Ya stats bụ n'ezie ịtụnanya. Ọ na-egosi kpọmkwem etu Sanches nwere ike ịdị na-arụ ọrụ dị iche iche na pitch.
Tebụl dị n'okpuru na-ekpughe ozi dị nkenke banyere Renato Sanches. Ọ na - enye gị ohere ịmegharị site na profaịlụ Portuguese ngwa ngwa o kwere mee.
Aha n'uju: Renato Junior Luz Sanches
aha otutu: Bulo
Ụbọchị ọmụmụ: Ụbọchị 18th nke August 1997
Ebe amụrụ onye: Amadora, Portugal
Nna: Renato Sanches
Nne: Maria das Dores
Rygwọ ọnwa kwa afọ: 2.65 nde (2021 stats)
elu: 1.76 m (5 ft 9 na)
Ihe omuma anyi banyere Renato Sanches na-egosi na nsogbu nke nwata kwesiri igbochi onye obula icho nnukwu. Na arụmọrụ ya magburu onwe ya na EURO 2020, Gabriel Malgahaes ọbụna dere arịrịọ na ibe ya na Instagram, na-arịọ ya ka ọ sonyere Arsenal.
Ee, anyị nwere ike kọwaa ihe ịga nke ọma ya na meteoric dị ka ngwaahịa nke chioma. Agbanyeghị, Sanches Life Story egosila ihu ọma dị ka ọnọdụ mgbe ịrụsi ọrụ ike na ịdị njikere zutere ohere. Ma ọ bụghị ya, olee ihe ọzọ ọ ga-amasị ndị na-egwu egwuregwu mgbe ọ malitere njem ịgba bọl?
Ọ dị anyị mkpa ịja nne ya na nna ya mma, bụ́ ndị leghaara ọdịiche ha anya iji dozie esemokwu ndị metụtara afọ ndụ ya. N'ezie, ha egosila na ha bu ọdịmma kasịnụ nke nwa ha n'obi.
Moreso, ezinụlọ ya dum bụ otu n'ime ọtụmọkpọ nke mere ka ọ rụọ ọrụ ya. Daalụ maka ịgụ mpempe akwụkwọ ncheta anyị.